Vision and Mission » Taungoo Education College
To create inspired, dynamic, innovative, constructive and critically reflective educators who possess deep knowledge and skills, competency in their fields of teaching and learning and work collaboratively to achieve high quality and personalities and professional career.
သင်ကြားသင်ယူမှုနယ်ပယ်အသီးသီး၌ နက်နဲသော အသိပညာဗဟုသုတ ကျွမ်းကျင်မှုရှိ၍ မြင့်မားသော သင်ကြားသင်ယူမှုစွမ်းရည်၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ဆရာဘဝသက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာရပ်ကိုရရှိ၍ အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည့် သင်ယူမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပြီး တက်ကြွဖျတ်လတ်သော ဆန်းသစ်သည့် အမြင်ရှိသော အပြုသဘောဆောင်၍ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်စွာ တွေးခေါ်သုံးသပ်နိုင်သော ပညာရေးပညာရှင် များကို ဖန်တီးမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်။
To foster and drive high quality professional development for teachers and school leaders through professional competency, professional teaching and learning andanational approach to the accreditation of pre- service and in-service teacher education.
ဆရာအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု၊ ဆရာသင်ကြားသင်ယူမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာ့အတတ် ပညာရေး အရည်အသွေးအာမခံ အသိမှတ်ပြုရေး နိုင်ငံတော်အဆင့် ချဉ်းကပ်ဖော်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် သင်ကြားမှုဆိုင်ရာဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုသူများအတွက်၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ဆရာ သက်မွေးပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထိန်းသိမ်းဖော်ဆောင်ရန်။
လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်း ဆရာအတတ်ပညာ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅/၁၈) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
Copyright © 2018 >> U Zaw Thet Aung, ICT Tutor, Taungoo Education College. All Rights Reserved.